Otú o si arụ ọrụ - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Iji usoro ndị a dị mfe ma dị mfe, Sunsonexpress nwere ike inye aka wepụ isi ọwụwa gị na-enyere gị aka ịbawanye azụmaahịa gị. Mmezu zuru oke na nke zuru oke na ngwa ahịa ụlọ nkwakọba ihe na nsuso ozi
Nzọụkwụ 1- Ngwọta a haziri ahazi
Njikere iji outsource mmezu gị? Kpọtụrụ Sunsonexpress na onye njikwa mmepe azụmaahịa ga-ekenye maka nkwado n'oge usoro niile. Maka ahịa ọ bụla, anyị ga-enyocha ngwaahịa gị, ngwa ahịa, ahịa ebumnuche, ma zaa ajụjụ ọ bụla ị nwere. Mgbe nke ahụ gasị, anyị ga-enyocha mkpa azụmaahịa ha ma nye ha mmezu kachasị mma na azịza mbupu.
Nzọụkwụ 2- - BNDRVRV NKE ỌZỌ B Sun Sunsonexpress
Mgbe imepụta akaụntụ onye ọrụ gị n'efu, biko mepụta ASN (Advanced Mbupu Mara) ma zipu ngwaahịa gị na Sunsonexpress center. Onweghi onu ogugu kachasi nkpa, zipu otutu ihe ichoro. Ndị ọchụnta ego nwere ike irite uru ọnụego mbupu mbupu nke Sunsonexpress.
Anyị otu na-enweta gị ngwaahịa, mepụta zuru ezu ndenye ego, na-foto ma ọ bụ na-eduzi QC gị nkọwa, mgbe ahụ a n'ụlọ ya na ị họọrọ iji mezuo center, ị nwere ike inyocha na ịchịkwa gị yiri nkata site na akaụntụ center。
3kwụ na 3kwụ 3 - Mepụta Iwu
Ndị ahịa na-etinye iwu site na ebe nrụọrụ weebụ gị ecommerce, ma nyefee ha na otu Sunsonexpress site na API, bulite ogbe site na CSV ma ọ bụ jiri aka kee iwu.
A na-anata ma nyochaa gị n'ime sistemụ anyị site na iji sistemụ ụlọ nkwakọba ihe nke ụlọ.
4kwụ na 4kwụ 4 - Buru, Mkpọ NA ụgbọ mmiri Ndepụta
Ozugbo ị nyefere iwu na akaụntụ akaụntụ tupu anyị ebipụ oge, Sunsonexpress na-eme otu ụbọchị ahụ. Anyị ga-eburu ma jụọ nke ọma ma dozie mbupu mba ụwa ngwa ngwa. Ka ọ dị ugbu a ị na-ahapụ ka ịnwe ọhụụ na njikwa zuru oke na usoro mmezu site na akaụntụ akaụntụ.
Ndi otu ndi okacha amara anyi choro ma buru uzo tinye ihe nlere ma tinye ihe obula ma obu ihe nkwalite ichoro.
Anyị na-enye gị visibiliti nke usoro niile yana nsuso site na ụlọ nkwakọba ihe nye ndị ahịa gị n'ọnụ ụzọ.
5kwụ na 5kwụ 5- KWESSR R nweta PARCEL
Mgbe ụbọchị ụfọdụ nke njem, ndị na-azụ ahịa na-enweta ngwugwu. Anyị na-abụghị nanị na-emezu na-anapụta gị ngwugwu, ma napụta na ndị ahịa afọ ojuju.
You na-eche echiche banyere ịchụpụ mmezu eCommerce gị na China? Biko kpọtụrụ anyị.